Sida loo hawlgeliyo toobiye si loogu wargaliyo xaaladaha degdegga ah EMUI | Androidsis
Qaar badan ayaa ah tabaha waxqabadka leh ee EMUI ay leedahay, lakab aad si buuxda u habeyn karto markii aad bilowdo isticmaalkiisa qalabkaaga Huawei / Honor. Waxyaabaha badan ee aan ku gaari karno quful barnaamijyadooda oo leh lambarka sirta ah, saxiix saxiix shaashadda qufulka, iyo waxyaabo kale.
Sidoo kale waxaan dhaqaajin karnaa toobiye si aan u ogeysiino xaaladaha degdegga ah ee EMUI, waxtar u leh inaan isku helno xaalad halis ah ama inaan u yeerno qof kuu dhow. Tani waxay ka dhigi doontaa mid ka mid ah xaaladaha aad ugu soo wici karto si dhakhso leh oo kaliya adigoo riixaya taleefanka dabka wadar ahaan shan jeer.
Soosaarayaasha kale waxay leeyihiin toobiyeyo markay wacayaan lambarka deg-degga ee bilaashka ah, qaabeynta waxay kuxirantahay mid walba In Huawei / Honor waxaan ku habeyn karnaa waxyaabo badan oo ka mid ah xulashooyinkeeda, waxaa fiican inaad ku dhejiso taxane aad rabto oo aan ahayn kan ku yimaadda asalka, laakiin had iyo jeer xusuusnow.
Dhaqdhaqaaqa waa dhakhso, tan waa inaad aadaa goobaha ka dibna waxaad u diri kartaa farriin SMS mid ka mid ah dadka aad la xiriirto si aad ugu wargeliso inaad ku sugan tahay xaalad khatar ah. Labada midkoodaba ansax buu noqon karaa waana taas sababta ay ugu wanaagsan tahay inaad adigu barnaamij u sameyso.
Si aad u dhaqaajiso toobiye loona ogeysiiyo xaaladaha degdegga ah ee EMUI, waxaa loo sameeyaa sida soo socota:
Gali Nidaamyada qalabkaaga moobaylka
Hadda marin u hel ikhtiyaarka "Amniga" oo guji "SOS Emergency"
Halkan waxaad ka dooran kartaa inaad u wacdo mid ka mid ah xiriiradaada xaaladaha deg-degga ah, waad iskudubbaridi kartaa
Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad u dirto emayl SMS ah mid ka mid ah dadka aad la xiriirto, u hagaajiso taleefanka, tan awgeed waa inaad dhaqaajisaa
Waxaa ugufiican in wicitaanka la ilaaliyo adiga oo riixaya badhanka awooda shan jeer
Tani waa mid ka mid ah howlaha ay tahay inaad ka ogaato EMUI, lakab si aad ah u soo fiicnaaday waqti ka dib iyo marinka noocyada ayaa hagaajinaya waxqabadkiisa. Huawei / Honor wuxuu durbaba tijaabinayaa HarmonyOS 2.0 Beta moodooyinka la taageeray, oo ay ku jiraan Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei Mate 30, Mate 30 Pro iyo MatePad Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo dhaqaajiyo toobiye si loo ogeysiiyo xaaladaha degdegga ah ee EMUI
Sidee looma seegin ogeysiis kasta oo leh taariikhda Android 11